श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिरर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल फाल्गुन १३ गते सोमबार नेपाल सम्बत ११३९ सिल्लागा तदनुसार सन् २०१९ फेब्रुवरी २५ तारिक कृष्णपक्ष षष्ठी तिथि विहान १० वजेर ५३ मिनेटसम्म उप्रान्त सप्तमी तिथि,विशखा नक्षत्र राती ३ वजेर ३२ मिनेटसम्म उप्रान्त अनुराधा नक्षत्र,ध्रुवयोग,वणिज करण,आनन्दादियोग मित्र,सूर्य कुम्भ राशीमा,चन्द्रमा राती ९ वजेर ३१ मिनेटसम्म तुला उप्रान्त वृश्चिक राशीमा ।
राहुकालः–अशुभ विहान ८ बजेबाट ९ वजेर २६ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः– विहान १० वजेर ५२ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर १७ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य अपरान्ह ३ वजेर ८ मिनेटबाट ४ वजेर ३४ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ अपरान्ह २ वजेर ५७ मिनेटबाट ३ वजेर ४३ मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५४ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ४० मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेसम्म अमृत वेला,८ वजेबाट ९ वजेर २६ मिनेटसम्म काल वेला,९ वजेर २६ मिनेटबाट १० वजेर ५२ मिनेटसम्म शुभ वेला,१० वजेर ५२ मिनेटबाट १२ वजेर १७ मिनेटसम्म रोग वेला,१२ वजेर १७ मिनेटबाट १ वजेर ४३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१ वजेर ४३ मिनेटबाट ३ वजेर ९ मिनेटसम्म चर वेला,३ वजेर ९ मिनेटबाट ४ वजेर ३५ मिनेटसम्म लाभ वेला र ४ वजेर ३५ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर ३६ मिनेटसम्म चर वेला,७ वजेर ३६ मिनेटबाट ९ वजेर १० मिनेटसम्म रोग वेला,९ वजेर १० मिनेटबाट १० वजेर ४४ मिनेटसम्म काल वेला,१० वजेर ४४ मिनेटबाट १२ वजेर १९ मिनेटसम्म लाभ वेला,१२ वजेर १९ मिनेटबाट १ वजेर ५३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१ वजेर ५३ मिनेटबाट ३ वजेर २७ मिनेटसम्म शुभ वेला,३ वजेर २७ मिनेटबाट ५ वजेर १ मिनेटसम्म अमृत र ५ वजेर १ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म चर वेला रहनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस मोदीले फेरि भने, ‘भारत बुद्धको देश हो’
यो पनि पढ्नुहोस मुलुकमा ३ लाख अति गरिबः गरिब पहिचान गरिँदै, ८ लाख गैरगरिब भेटियो
मकरः–मनलाई दमन गरेर काम गर्नु होला । तपाईका सोच र विचार सर्वमान्य हुनेछन् । कामले प्राथमिकता पाउनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोजी हुनेछ प्रयत्न गरेमा प्राप्त हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । स्वतन्त्र व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस टि–शर्ट लुक खुबै सुहाउँने बलिउडका १२ अभिनेत्री
कुम्भः–समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । लगनशिलता बढाउनु होला । अरुका कामलाई कम प्राथमिकता दिनुहोला नत्र आफ्ना काम अधुरा रहनेछन् । यात्राको सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न । धार्मिक काममा सक्रियता बढ्नेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । कला सहित्यतिर मन जानेछ । समस्या घट्दै जानेछन् । शैक्षिक परामर्श मिल्नेछ ।
मिनः– धेरै सपना नदेख्नु होला,सोचे जस्तो समयले साथ दिने छैन । नयाँ कामको शुरुवत नगर्नु होला विग्रिने सम्भावना बढि देखिन्छ । मानसिक तनाव बढ्नेछ । उपलब्धि विहिन खर्च बढ्नेछ । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुने देखिन्छ । आर्थिक कारोवारले टाउको दुखाउनेछ । अरुको भर परेर काम गर्नु भयो भने दुःख पाउनु हुनेछ र विगतका उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ । (राशिफलमा जे जस्तो भए पनि सवैको दिन सुखमय रहोस् । ईश्वर दाहिना हुन । भगवानले रक्षा गरुन । ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति ! ! ॐ शान्ति ! ! ! श्रीकुृष्णार्पणास्तु )
१३,फाल्गुन.२०७५,सोमबार ०६:३० मा प्रकाशित
← शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै
वाइडबडी खरिद प्रकरणः रवीन्द्र अधिकारी र शेरबहादुर देउवा अनुसन्धानमा तानिने →